चलचित्र ‘छक्का पञ्जा २’ किन दोस्रो पटक प्रदर्शन हुँदैछ ? - Everest Dainik - News from Nepal
चलचित्र ‘छक्का पञ्जा २’ किन दोस्रो पटक प्रदर्शन हुँदैछ ?
काठमाडौं, चैत १२ । यो वर्ष एकाध चलचित्रलाई छोड्ने हो भने अधिकांशले राम्रो व्यापार गर्न सकेनन् । निर्माताले लगानीसम्म उठाउन सकेनन् भने हल सञ्चालकलाई पनि चलचित्र नचलेपछि हल सञ्चालन गर्नै कठिन भइरहेको छ । मल्टिप्लेक्स सञ्चालकलाई हिन्दी र केही अंग्रेजी चलचित्रले राहत दिए पनि सिंगल थिएटरलाई भने निकै गाह्रो परिस्थिती आएको हल सञ्चालकहरु स्वयम्ले बताउँदै आएका छन् ।
यसको लाभ चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ युनिटले उठाउन पाउने भएको छ । एकपटक प्रदर्शन भइसकेको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा–२’ पुनः एकपटक रिलिज हुने भएको छ । यो चलचित्रलाई नयाँ वर्षको वैशाख १३ गतेबाट फेरि दर्शकले हेर्न पाउने भएका छन् ।
‘छक्का’पञ्जा’को अर्को सिरिज चाहियो भनेर हल सञ्चालकहरुले कराको कराई हुनुहुन्छ । हामीले छक्का पञ्जाको नयाँ सिरिजमा काम गरिरहेका पनि छौं । तर केही समय लाग्ने भएपछि पुरानै चलचित्र भए पनि पुनः चलाउन देऊ भनेर भनिरहेका छन्,’ चलचित्रका निर्माता, लेखक तथा कलाकार दीपकराज गिरी भन्छन्, ‘उनीहरुको निरन्तरको आग्रहलाई हामीले स्वीकार गरेका हौं । हामीले गर्दा हललाई पनि फाइदा पुग्छ भने किन पछि हट्ने भनेर हामीले हुन्छ भन्यौं ।’
चलचित्र प्रदर्शनबाट उठेको केही रकम सामाजिक सेवामा खर्चिने योजनामा ‘छक्का पञ्जा’ युनिट रहेको छ । सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेले कालीकोटमा बनाउने भनिएको अस्पताल निर्माणका लागि चलचित्र प्रदर्शनबाट उठेको रकम मध्य केही सहयोग गर्ने गिरीले जानकारी दिए ।
चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’लाई आम दर्शकले युट्युब रिलिजका लागि प्रतिक्षा गरिरहेका बेला दोस्रोपटक हलमा प्रदर्शन हुन लागेको हो । फष्ट रिलिजमा यो १५ करोडभन्दा माथि ग्रस कलेक्सन गरेको चलचित्र दोस्रो पटक रिलिज हुन लागेको हो । यो चलचित्रले पढ्नका लागि विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको कथा र समस्यालाई उठान गरेको छ ।
‘नेपालमा पहिला पहिला दोहोर्याएर चलचित्र रिलिज गर्ने परम्परा थियो । पछि हटेर गएको थियो । बाहिर देशहरुमा अहिले पनि यो चलन छ,’ गिरी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि फेरि एकपटक प्रयोग गरेर हेरौं कस्तो हुँदोरहेछ ।’
अधिकांश चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न नसक्नु नै दोस्रो पटक ‘छक्का पञ्जा’ले प्रवेश पाउनुको मुख्य कारण रहेको उनी बताउँछन् । ‘कुरा गर्दा अरुको आलोचना गरे जस्तो हुन्छ तर वास्तविकता भन्नुपर्दा अधिकांश चलचित्रले लगानीको सानो हिस्सा पनि उठाउन सकेका छैनन् । हिन्दीमा ८० प्रतिशत चलचित्र एभरेज बन्छन् तर हाम्रोमा सयमा ५ वटा जति मात्रै एभरेज बन्छन्,’ गिरी भन्छन्, ‘अधिकांश चलचित्र त आधा समय पनि हेर्न सकिँदैन । यही कारण हो हाम्रा चलचित्र चल्न नसक्नुको कारण ।’
दोस्रो रिलिजमा पनि चलचित्र चलेको खण्डमा राम्रो भए नेपाली चलचित्रका दर्शक रहेको पुनःपुष्टि हुने र नयाँ मानक पनि स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।
‘छक्का पञ्जा–२’ पुनः रिलिज भएपनि केही दृश्य भने फरक हुने निर्माण पक्षको दाबी छ । ‘कथाको थिम उही भएपनि निकै भिन्नता दर्शकले पाउनेछन्,’ गिरीले भने, ‘हामी दर्शकलाई नयाँ चलचित्र हेरे जस्तो अनुभूत गराउने छौं ।’ चलचित्रलाई दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेकी छन् ।